तीन पटक ‘तलाक’ भन्दा सम्बन्धविच्छेद हुने परम्परालाई भारतमा गैरकानुनी घोषणा – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
तीन पटक ‘तलाक’ भन्दा सम्बन्धविच्छेद हुने परम्परालाई भारतमा गैरकानुनी घोषणा
By Digital Khabar Last updated Jul 31, 201990
एजेन्सी । भारतीय संसदको माथिल्लो सदनले मुसलमानहरु माझ तीन पटक तलाक भनेर सम्बन्ध विच्छेद हुने परम्परालाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने एक विधेयकलाई मंगलबार स्वीकृत गरेको छ ।
मुस्मिल महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक नाम दिइएको उक्त विधेयकको पक्षमा ९९ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ८४ विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विधेयक पारित हुनु अघि जदयू र अन्नाद्रमुक पार्टीका राज्य सभाका सदस्यले विधेयकको विरोध जनाउदै सदन बहिरगमन गरेका थिए ।
केन्द्रीय कानून तथा न्याय मन्त्री रविशंकर प्रसादले विधेयकमा छलफल हुँदा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
रविशंकरले तीन पटक तलाक भनेर हुने सम्बन्धविच्छेदबाट प्रभावित हुने ७५ प्रतिशत महिला निम्न वर्गको भएकाले तिनलाई ध्यानमा राखेर यो विधयक ल्याएको बताए ।
उनले आफूले चिन्ने एक जना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने र तीन छोरी भएकी महिलाको श्रीमान्ले एसएमएसमा तीन पटक तलाक लेखेर सम्बन्ध विच्छेद गराएको घटनाको सम्झना गरे ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा मुसलमानलाई चाँही किन जेल ?
राज्यसभामा छलफलको समयमा वाईएसआर कंग्रेसका विजयसाई रेड्डीले यस्तै प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘त्रिपल तलाकलाई कानूनले निस्तेज गर्ने भनेको छ । फेरी पुरुषलाई तीन वर्षको जेल चाँही किन ? अधिकाशं निम्न वर्गको परिवारमा कमाउने पुरुष हुन्छ । ऊ तीन वर्ष जेलमा हुँदा परिवारको अवस्था के हुन्छ ?’
समाजवादी पार्टीका जावेद अली खानले यस्तै तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘कयैन अवस्थामा मुसलमान महिला आफै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छन् । सरकारले ती महिलाको आर्थिक गुजारामा सघाउने कानूनचाँही किन ल्याउदैंन ?’
बाबुआमाको निधन नभइ सन्तानले सम्पत्तिमा हकदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग